नेपाली आकास माथि नै अब नेपाली स्याटेलाइटकै आँखा, भयो विश्वभरिबाट स्वागत (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्) - Nepal Insider
Home/समाचार/नेपाली आकास माथि नै अब नेपाली स्याटेलाइटकै आँखा, भयो विश्वभरिबाट स्वागत (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)
नेपाली आकास माथि नै अब नेपाली स्याटेलाइटकै आँखा, भयो विश्वभरिबाट स्वागत (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)
दुई महिनाअघि अमेरिकाको भर्जिनियास्थित स्पेस कम्पनी ‘अर्बिटल एटिके’ को रकेटबाट अन्तरिक्षमा छाडिएको नेपाली स्याटेलाइटले सोमबारदेखि पृथ्वीको डाटा लिन थाल्नेछ। यसअन्तर्गत तस्बिर खिच्ने र मौसमसम्बन्धि साधारण जानकारी दिने काम स्याटेलाइटले गर्नेछ।
नेपाली झन्डा र विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) को लोगोअंकित उक्त भू-उपग्रहलाई ‘नेपाली स्याट-१’ नाम दिइएको छ। दुई महिनाअघि नै छाडिएको भए पनि हालसम्म यो अन्तरिक्षको भू-उपग्रह स्टेशनमा परीक्षण हुँदै थियो। यसलाई आज पृथ्वीको कक्षमा छाडिने नास्टका डाटा सेन्टर प्रमुख रोशन पाण्डेले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
‘अन्तरिक्षको स्टेशन (कार्गो) मा गएर बसेको स्याटेलाइटलाई आज पृथ्वीको कक्षमा छाडिन्छ,’ उनले भने, ‘यो स्याटेलाइट पृथ्वीबाट चार सय किलोमिटर माथि रहन्छ। नेपाली आकाशमा आएर यहाँको तस्बिर खिच्छ।’
‘यो अहिले नै हामीकहाँ आइपुगेको छैन,’ सोमबार दिउँसो पाण्डेले भने, ‘यसले काम गरिरहेको छ/छैन बुझ्न भुटानका साथीहरूलाई भनेका छौं। डाटा लिइदिन पनि भनेका छौं।’
‘छन्, धेरै जनशक्ति चाहिँदैन,’ नास्टमा डाटा सेन्टर प्रमुख पाण्डेले भने, ‘यो ठूलो स्याटेलाइट होइन नि! यसले फोटो त पठाउने हो।’
‘नेपाली आकाशको यही विन्दुमा स्याटेलाइट आउँछ भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘यो घुमिरहन्छ। हाम्रो आकाशमा आएका बेलाको डाटा लिनुपर्छ। एक पटकमा तीन मिनेटजति बस्छ।’
‘हामी नेपालका वैज्ञानिकहरूले लामो समयदेखि देख्दै आएको सपना साकार हुँदैछ,’ नास्टको प्रविधि विभाग प्रमुख डा. रवीन्द्र ढकालले सेतोपाटीसँग भने।
नास्टका अनुसार यो स्याटेलाइट ‘नानो’ वर्गमा पर्छ। नानो भनेको सानो आकारको हो, जुन एकदेखि १० किलोको हुन्छ। योभन्दा सानो स्याटेलाइट पनि हुन्छ, जसलाई ‘पिको’ भनिन्छ। यसको तौल सय ग्रामदेखि एक किलोसम्म हुन्छ।
चीनसँग समझदारी : कुनै ऋण हाेइन, सबै अनुदान